Ezezimali - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
I-Prairie State Legal Services isekelwa yiqembu elihlukahlukene lezisekelo, izinkampani, abantu, kanye nezinhlangano zikahulumeni ezinikeza isisekelo esizinzile senhlangano yethu ukufuna ukufinyelela okulinganayo kwezobulungiswa emiphakathini yethu esengozini enkulu.
Isifunda sasePrairie kwenziwa ucwaningo olunzulu oluzimele unyaka ngamunye ngokuya ngamazinga wokucwaningwa kwamabhuku kaHulumeni wase-US ngaphansi kwemithetho ye-Office of Management and Budget Circular A-133 kanye ne-Legal Services Corporation. IPrairie State ifaka ifomu le-IRS 990 unyaka nonyaka. IPrairie State iyaziqhenya ngokuthola isilinganiso sezinkanyezi ezi-4 esivela kuCharity Navigator kanye nePlatinum Seal of Transparency evela ku-GuideStar.
IMIBIKO YEZEZIMALI YAKAMUVA KAKHULU
Umbiko Wezezimali ka-2020
Ifomu le-2020 990
IMIBIKO YANGAPHAMBILI YONYAKA
Umbiko wonyaka we-2019
Umbiko wonyaka we-2018
Umbiko wonyaka we-2017
Umbiko wonyaka we-2016
Umbiko wonyaka we-2015
Umbiko wonyaka we-2014
amahora 2 edlule